Socodkii Arraweelo – Kasmo Newspaper
Updated - June 10, 2015 6:48 am GMT
Anqaasta Cabdulqaadir Shire Faarax,
Hadday dal jeceyl , iyo hadday masrax noqonto, ama heesta aradayda dugsiyadu qaadaan ama tan muusigga ay ku soo gasho BBC London, intaba Cabdullaahi Qarshe wuxuu ahaa qof igu ku dhex nool.
Markii iigu horraysay iyo halkii aan ku bartay toona ma aan xusuusto. Tan keliya oo aan xusuusto waa galab aan fogayn markii aan soo galay ‘Bush House’ ee BBC London. Halkaas oo Laanta Af-Soomaaligu ku soo gaba- gabeynaysay barnaamij ay ku xusaysay 40 Guurada ka soo wareegtay markii iyada la aasaasay.
BBC-du 40kaas sanaba waxay ku gaardinayey (yeersanayeysay) muusigga socodka Arraweeladii la sheegay in ay quruumo hore ka talin jirtay geyiga Soomaaliya. Taas oo dib noogu soo noolaatay markii Cabdullaahi Qarshe, laxan iyo muusig ugu sameeyey habkii ay u socon jirtay boqoraddu.
Colaadda Ingiriisku Soomaali u qabo, malaha, waxaaba looga cabir qaadan karaa Laanta Afka Soomaaliga oo yeersata ‘turubada’ socodkii Arraweelo oo shakigii rag iyo dumar ay kala gelisay uu ilaa maanta taagan yahay. Hase ahaatee, BBC-du in ay xuquuqda alifidda u ogolaatay Cabdullaahi Qarshe iyo in ay booli ku haysato oo ay wax ka soo bililiqaysatay maskaxda Soomaalida markii Ingiriisku wax ka gumeysanayey Soomaaliya, mid ay tahayba baaritaan kuma samayn. Haddiise Cabdullaahi Qarshe helay faa’iidada allifaha, markaas waxaa Abwaanku noqon lahaa qof ka mid ah kuwa ugu hodansan Fanaaniinta Qaaradda Afrika.
Yeelkeede, 26kii Sebtembar 1997, markii aan soo galay Istuudyaha BBC, waxaa ku sii dhex jiray Cabdisalaam Hereri. Maalmahaas, toddobaadyadaas iyo bilahaasba Laanta Af-Soomaaligu waxay baahinaysay Barnaamijyo taxane ah oo ay ku xusayso 40 Guurada ee ka soo wareegtay markii 1957 Laanta la aasaasay.
Qaybtii ugu dambaysay barnaamijkaas waxay ahayd heesta Cbdullaahi Qarshe ee socodkii Arraweelo. Aniga iyo
Cabdisalaam Harari, midkoodna ma ogayn in heestaasi noqon doonto tii ugu dambaysay oo aan maqallo iyadoo Cabdullaahi Qarshe nool yahay.
“Cabdullaahi Qarshe, Ilaahay wuxuu ku manaystay Cimri dheer.” waxaa yiri Hereri. “Allaha u sii siyaadiyo” waxaa yiri aniga, kadibna waxaa qolka Istuudyaha soo galay Siciid Cali Muuse oo xaggayga u soo jeedshay makarafoon, iyo su’aashii u horraysay, su’aalo ku saabsan Wargeyska Kasmo oo uu iweyddiiyey.
Waxaa gacantayda ku jiray cadadkii 1aad ee Kasmo, waxaana Xafladda abuuritaanka Wargeysku dhacday Sabtidii 27ka Sebtembar 1997. Habeenimadii Jimcaha ee19 Sebtembar1997, waxaan diray Telefoon lambarkiisu yahay 0171-5370453 (London) – waxaana xagga kale ka qabtay Cabdullaahi Qarshe, kaas oo aan ku martiqaaday xafladda abuuritaanka Wargeys lagu magacaabo Kasmo. Waxaan ka codsaday in uu ka soo qaybgalo munaasabadda aasaasidda Kasmo.
Si weyn ayuu soo dhoweeyey casuumadda iyo figradda wargeyskaba, wuxuuse ka cududaartay in uusan ka soo qayb-geli karin; “Waxaan 25ka bisha la ballansan nahay Takhtar. Waxaan filayaa in aan 27ka aallayo Isbitaalka. Iiga cududaar in aanan imaan karin xafladda, oo aan xanuunsanayo. Magacayga hambalyo iigu dheh xafladda, una sheeg ‘Cabdullaahi Qarshe wuu idin salaamayaa, wuxuuna idin ka codsanayaa in aad hirgelisaan oo uusan joogsan Kasmo” waxaa yiri Cabdullaahi Qarshe oo aniga ila hadlaya.
Cajalad Video oo laga duubay xafladdii Kasmo, waxaa ku keydsan eraydaan;“ Nin aan u malaynayo in uu yahay kan ugu da’ weyn fanaaniinta nool ee Soomaalida, Cabdullaahi Qarshe oo aan jeclaa in uu joogo xafladda ayaa xanuunsan, wuxuuna iga codsaday in aan idin soo gaarsiiyo Hambalyadiisa, una cudadaaro in uusan caafimaad darti la imaan karin.” erayadaan kooban aniga ayaa u sheegay xafladda aasaaska Kasmo oo lagu dhex qabtay Maktabad weyn oo ku taal galbeedka magaalada London, waa Willesden Library.
Xafladdii Kasmo maalmo yar ka dib, waxaa mar, laba iyo seddexba talo ii soo jeediyey Khaalid Macow. Wuxuu iga codsaday in aan C.Qarshe soo booqanno iyo in aan waraysi la yeellanno.
Ma dhicin, waxaana wargeysku weli ku koobnaa cadadkii 1aad. Waxaan fekarayey in aan si fiican u habaynno shaqada, dadkuna barto in aan Kasmo lug ku lahayn koox iyo qaybiil toona. Laakiin waxaa ka soo hormaray tii Alle, waxaana geerida Cabdullaahi Qarshe i soo gaarsiiyey Khaalid Macow laftiisa oo iiga naxsaday ‘waayista qof aan jeclaa intii la doono’.
Cabdullaahi Qarshe wuxuu dhintay isagoo aan arag wargeyskii uu jiritaankiisa ka dardaarmay iyo Kasmo oo aan waraysi ugu tegin. Sidaas darteedna waxaan weligay necbaan doonaa geerida iyo waraysi Abwaan geeriyoon doona. Weliba tan London waxay I soo xusuusisay tu dhacday mar laga joogo in ka badan toban sano, taas oo ku beegnayd 1986.
Goor fiid ah, qiyaasta 7.30 ayaan ka baxay xaafiiska Wargeyskii Ogaal oo aan ka shaqaynayey (1985-1990). Gaarga aan wato keligay ayaa saaran,, wuxuuna ku sii socday xagga is-gooyska wadada Afgooye aadda. Waxaan Xamar ka degganaa Qolka B9 ee xaafadda African Village.
Hal mar ayaa wax iiga baaqeen xagga Sanaag, waxaana dareenkayga ku soo dhacay Abwaankii weynaa Xaaji Aden Af-qalooc. Xaajiga waxaan bartay 1977, waqtigaas oo aan ururkii Dhalinyarada Kacaanka Soomaaliyeed ka tirsanaa, Xarunta ururka ee ahaan jirtay meeshii SYL ayaa Xaajigu, isagoo soo dugsanaya rajada uu ka qabi karo dhalinyarada wuxuu ka degganaa qol.
Maalintii inta badan, marka uu guriga ka soo baxo, wuxuu soo fariisan jiray Baar xarunta ku dhex yaal. Waxaan qirsanahay in aanan garan karin qofka nagu dhex jira oo maalin walba nala jooga Baarka dhalinyarada, waxa uu nooga duwan yahay, ilaa aan warsaday Xaajiga inta sano oo uu jiro? Jawaabtii Xaaji Aden waxay ahayd “127 sano ayaan jiraa”.
Xaaji Aden Af-Qalooc, xarunta ayuu khudbad noogu jeediyey habeenkii ka horreeyey maalinta aan filkiisa warsaday. Khudbadaas oo uusan meel qoran ka akhriyeen, waxaa Xaajigu ku bilaabay eray Carabi ah “ Yaa shabaabii” oo la mid ah dhalinyaradaydiiyeey …
Habeenkaas uu khudbadda noo jeediyey toban sano ka dib, ayaan soo xusuustay Xaaji Aden Af-Qalooc.
Waqtigaan Xaajigu wuxuu jiraa 137, waxaana igu soo dhacay in aan qaban-qaabiyo safar aan ugu ambabaxo Gobolka sanaag. Kaas oo ujeedadiisu tahay in aan Xaajigii dib ula kulmo, soona waraysto.
Weli baabuurkii baan saar nahay, waxaana si xoog leh daqiiqado yar maskaxdaydu ka shaqaynaysay tifaftirka waxa loo baahan yahay in aan sii diyaariyo, tirada dadka baxaya, Video Kamera, cajalado, rekoor, gaadiidka tan iyo Sanaag, dhul iyo cir kii uu noqon karo iyo sahayda loo baahan yahay, iwm. Waxaan goostay in aan laba maalmood gudahood uga baxo Xamar.
Culayska shucuur ahaan i hafiyey iyo tan safarka dartood, waxaan toos u soo aaday aqalkaygii ku dhex yiil African Village. Waxaan furtay qolkii, nalkii baan shiday. Dhinaca bidix, ka soo jeedka derbiga raadiye dul saaran miis ayaan furay. Saacaddu waa 8.00 fiidnimo oo Raadiyo Muqdisho sheegi jiray warka.
Markaan raadiyaha furay waxaa ku jirtay muusikadii warku ku soo geli jiray, waxaana eraygii ugu horreeyey uu ahaa; “Allaha u naxariistee, waxaa maanta oo bishu ahayd —”. Markii uu intaas marayey, waan hubay in qofka uu sheegi doono uu yahay Xaaji Aden Af-qalooc.
Ilaa hadda ma aqaan sababta aan u hubay in qofkaas aan weli Radio Muqdisho sheegin magaciisa uu yahay Xaaji Aden Af-Qalooc, waana uu noqday, waxaana hubaal ah in habeenkaasi ka mid noqday kuwii farxad la’aanta aan ku hoyday. Halkaas oo wareysi iyo is-arag aniga iyo Xaaji Aden ay ku joogsatay, sida Kasmo ay u wareysan weyday Cabdullaahi qarshe o il-geeriyaad lahaa…
Xigasho: Keydka Wargeyska Kasmo, tirsigii 4aad, 27kii Disember 1997.